कहाँ हराए जातको कुरा गर्दा भाटे कार्वाही गर्ने जनयुद्दका कमाण्डरहरू ? - Everest Dainik - News from Nepal
इतिहास निर्मम हुन्छ । इतिहासका घटनाहरु कहिलेकाहिँ प्रहसन या मजाकका रुपमा दोहोरिन्छन् पनि । अहिले जाजरकोट घटनाले इतिहासलाई त्यही रुपमा गिज्याइरहेको छ ।
चौरजहारी र जाजरकोट, समग्र मानवजातिको मुक्ति, समानता र न्यायको दावी गर्दै घोषणा गरिएको सशस्त्र जनयुद्धको एउटा चर्चित नाम हो । कुनै बेलाको आधार इलाका या विशेष क्षेत्र ।
चौरजहारीमा जनयुद्दताका उम्रेका ससाना बुट्यानहरुले मुक्तिका गीत सुने । उनीहरुले जातपात छूवाछूतविरुद्ध ओकलिएका भाषण सुने । जङ्गलमा ‘मुक्ति योद्धाहरु’का पाइलाहरुको आवाज सुन्दा यी बुट्यानहरु समेत तर्सिन्थे ।
तर अहिले ती बुट्यानहरु रुख बनिसकेका छन् । र, इतिहासको मजाक हेर्दैछन् । त्यही मुक्तियुद्धको साक्षी बनेको चौरजहारीमा दलितमाथि निर्मम कुटपीट हुन्छ । हत्या हुन्छ । गल्ती जसको जे सुकै किन नहोस्, जातकै बहानामा त्यहाँ हिंसा हुन्छ । जातको मानसिकताले जघन्य हत्याकाण्ड निम्तिन्छ । तर दुखद अवस्था, त्यही जातको बिरोध गर्नेहरु आज कानुन र नियमका कुरा गर्छन् । आज उनीहरु अमेरिकामा पनि जात प्रथा छ भनेर उम्किन खोज्छन् । दलित युवकले नै अर्काको घरमा जानु हुँदैनथ्यो भन्ने तर्क गर्छन् ।
याे पनि पढ्नुस ‘कमाण्डर’ को ट्रेलरमा अनुप र रबिनको टक्कर (ट्रेलरसहित)
हिजो यिनै कमाण्डरहरुले जातको मानसिकताको ऐतिहासिक व्याख्या गर्थे । मानिस मानिसबीचको विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँथे । एकजना दलित युवासँग कुनै गैरदलितले प्रेम गर्नु गलत होइन भन्ने गर्थे । अनि कसैले छूवाछुत गरेको खण्डमा भाटे कार्वाही गर्थे । भाटे कार्वाही खानेहरु अहिले पनि जाजरकोटमा कति छन् होला । तर आज तिनै कमाण्डरहरुको भाषा फेरिएको छ । उनीहरुका लागि दलितकै गल्ती लागिरहेको छ ।
राज्यसत्ताले त गरेन तर समाजको किनारमा मिल्काएका दलित समुदायमा मुक्तिको सपना देखाउनेहरुले नै अहिले आएर आफ्नै आदर्श र शिक्षाविरुद्ध बोल्नु कति जायज हो ?
त्यो युद्ध के का लागि थियो ? ती कार्वाही के का लागि थिए ? यदि जातको मानसिकता नभएको भए के दलित युवाले हुल बाँधेर जान बाध्य हुन्थे ? प्रेम नै मुख्य हुन्थ्यो र जातले अर्थ राख्दैनथ्यो भने गल्ती नै गरेका भएपनि के दलित युवाले गल्ती गर्न पुग्थे त ? के उनी ठकुरी या अन्य जातिको भएको भए यो घटना हुन्थ्यो त ? ठीक छ, ती युवा त्यसरी जबर्जस्ती केटी लिन जानु हुँदैनथ्यो । त्यो उनको गल्ती मानौं रे ।
तर त्यसरी जान बाध्य कुन परिस्थितिले पार्यो ? के यो एउटा मात्र घटना हो र ? दलित र गैरदलितबीच प्रेम स्वीकार गर्न नसक्ने परिस्थिति अहिले पनि कायमै छ । यसरी अस्वीकृतिको परिस्थितिमा मुख्य कारण जातप्रथा हो भने त्यसबाट सिर्जित घटनाका आधारमा दलितलाई नै दोषी देख्न मिल्छ त ? त्यो पनि जनयुद्दका कमाण्डरहरुले, मुक्तियुद्दका संवाहकहरुले ?
अमेरिकामा जातप्रथा छ, तर अमेरिकमा पूँजिवाद पनि छ । भारतमा यस्तो छ, अमेरिकामा उस्तो छ भनेर हामीले हाम्रो यात्रा बिर्सिन मिल्छ ? के जनयुद्दमा सबैभन्दा बढी रगत बगाउने जात दलित नै होइन ? प्रहरी प्रशासन र कानुनका कुरा गर्ने र त्यही सही मान्ने भए त हिजो हामीले काला कानुन भनेर बिरोध किन गर्नु परेको थियो ?
जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको घाषणा भएको आज १३ वर्ष पुगेको छ । तर दलितमाथि हिंसा र हत्या बन्द भएको छैन । उनीहरु निर्मम तवरमा हरेक पल हिंसामा बाँच्न बाध्य नै छ । राजनीतिकरुपमा उनीहरुका उपस्थिति टोकन जस्तो बनेको छ । राज्यसंरचनामा उनीहरुको उपस्थिति अहिले पनि मानसिकरुपमा स्वीकार गरिएको छैन । राज्यसत्ताले त गरेन तर समाजको किनारमा मिल्काएका दलित समुदायमा मुक्तिको सपना देखाउनेहरुले नै अहिले आएर आफ्नै आदर्श र शिक्षाविरुद्ध बोल्नु कति जायज हो ?
याे पनि पढ्नुस रुकुम घटनामा आधारित ‘समान सबै जात हजुर’ गीत सार्वजनिक
नेपालको मुक्ति आन्दोलमा जाजरकोटको एउटा विशिष्ट स्थान छ । तर अहिले आफैले रचेको इतिहासलाई हामी आफै भत्काइरहेका छौं । आफैले हिंडेको बाटो आफै कुल्चिरहेका छौं । बाबुराम भट्टराईले पछाडिको थरमा दलित मुक्ति देखिरहेका छन् र जाजरकोटका कमाण्डरहरु दलितको गल्ती देखिरहेका छन् ।
दलित समुदायले राजनीतिक परिवर्तनपछि आफ्नो रुपान्तरण हुने आशा साँचेका थिए । तर राज्यसत्ताको व्यवहार र त्यसका संवाहकहरुको मानसिकता यही रहीरहने हो भने उनीहरु अर्को विद्रोहतर्फ नलाग्लान् भन्ने सकिन्न ।
हामीले समाजवादको कुरा गर्छौं तर के यो मानसिकताले समाजवाद आउँछ ? कसका लागि समाजवाद आउँछ ? कसको समृद्धि हुन्छ । समाजमा मान्छे मान्छेबीच विभेद कायमै रहिरहने अवस्थामा त्यो समृद्धिले कसका लागि अर्थ राख्छ ?
कम्तिमा इतिहासलाई च्यातचुत गर्ने काम नगरौं । इतिहास च्यात्न खोज्दा वर्तमान पनि भत्किन्छ र यसले कुरुप भविष्य निम्त्याउँछ भन्ने सोचौं ।
ट्याग्स: कमाण्डर, छुवाछूत, जनयुद्द, जात